မူလစာမျက်နှာ - Prairie ပြည်နယ်ဥပဒေရေးရာန်ဆောင်မှုများ
မစ်ရှင် & မျှော်မှန်းချက်
ကျွန်ုပ်တို့၏ အမှုဆောင်ဒါရိုက်တာအသစ်- Denise E. Conklin ကို မိတ်ဆက်ပေးခြင်း။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ကျွန်ုပ်တို့၏အသိုက်အဝန်းကို ဝန်ဆောင်မှုပေးရန် ဤနေရာတွင်ရှိနေသည်။ အရင်းအမြစ်များ ရရှိနိုင်သေးသည်။
Prairie State Legal Services သည် ၀ င်ငွေနည်းပါးသော - အလယ်အလတ် ၀ င်ငွေရှိသူများကိုအခမဲ့တရားဝင်အကူအညီပေးသည်။
နှင်ထုတ်ခြင်းအီလီနွိုက်ပြည်နယ် Hotline ကိုကူညီပါ
သင်၏ဆေးခြောက်ခံယူချက်ကိုချန်လှပ်ရန်အတွက်အခမဲ့ဥပဒေအကူအညီရနိုင်သည်ဟုသင်ထင်လျှင်“ ပိုမိုလေ့လာရန်” ကိုနှိပ်ပါသို့မဟုတ်ယနေ့စတင်ရန် newleafillinois.org သို့ဝင်ရောက်ပါ။
ဘာ WE လုပျဆောငျ
Prairie State Legal Services သည်အခမဲ့ဖြစ်သည် တရားဝင်ဝန်ဆောင်မှုများ ဘို့ ဝင်ငွေနည်းသူများ လေးနက်သောအသက် 60 နှင့်အထက်ရှိသူများ အရပ်ဘက်ဥပဒေရေးရာပြproblemsနာများ သူတို့ကိုဖြေရှင်းရန်တရားဝင်အကူအညီလိုအပ်သည်။ အီလီနွိုက်ပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတွင်ခရိုင် ၃၆ ခုအတွက်ရုံးခန်း ၁၂ ခုရှိသည်။
အီလီနွိုက်ပြည်နယ်တ ၀ ှမ်းရှိလူတို့သည်ရှေ့နေမတတ်နိုင်သောကြောင့်သူတို့သည်ဥပဒေအရရထိုက်သောအခြေခံအခွင့်အရေးများကိုနေ့တိုင်းငြင်းပယ်ခံရသည်။ အဲဒါကိုပြောင်းလဲဖို့ငါတို့မစ်ရှင်ပဲ။
Prairie State Legal Services သည်အလိုအပ်ဆုံးနှင့်အနည်းဆုံးတတ်နိုင်သူများကိုအခမဲ့တရားဝင်အကူအညီပေးသည်။
အရပ်ဘက်ဥပဒေရေးရာအထောက်အပံ့များရရှိနိုင်မှုသည်အိမ်နီးချင်းများ၊ အိမ်တွင်းအကြမ်းဖက်မှုမှလွတ်မြောက်ရန်၊ စစ်ပြန်များနှင့်မသန်စွမ်းသူများအတွက်အကျိုးခံစားခွင့်များရရှိရန်သို့မဟုတ်သူတို့၏လုံခြုံရေးအတွက်အဓိကဖြစ်သောအခြားတရားရေးစိန်ခေါ်မှုများကိုဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားနေသောကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်နီးချင်းများအားလုံး ၀ ခြားနားစေသည်။ နှင့်သုခချမ်းသာ။
ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ န်ဆောင်မှုနယ်မြေရှိလူပေါင်း ၆၉၀,၀၀၀ ခန့်သည်ဆင်းရဲနွမ်းပါးမှုတွင်နေထိုင်ကြသည်။ သူတို့မှာမိသားစုများ၊ မျှော်လင့်ချက်များနှင့်အိပ်မက်များရှိသည်။ သူတို့သည်သင်၏အိမ်နီးချင်းများဖြစ်ကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သင်အိမ်ပြန်ခေါ်သည့်ရပ်ကွက်များတွင်နေထိုင်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့လိုအပ်သောအခါအကူအညီများရရှိပါကကျွန်ုပ်တို့၏အသိုင်းအဝိုင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနေရာတစ်ခုဖြစ်သည်။
Su antecedente penal no debe definirlo. Únase con nosotros el martes 24 de Mayoalas 6:00 PM en la Biblioteca Pública de Highwood en 102 Highwood Avenue, Highwood IL para conocer más sobre el proceso de la eliminación de antecedentes penales y cómouda legal. Muchos နေထိုင်သူများ de Illinois enfrentan barreras de empleo, vivienda, educación, y de formación ပရော်ဖက်ရှင်နယ် debidoaantecedentes penales de años pasados Eliminar y sellar antecedentes penales puede ayudarloapasar la página y proseguir con sus objetivos de vida	... ပိုကြည့်ရှုပါအောက်ကိုကြည့်ပါ
Facebook ပေါ်မှာဝေမျှမယ် Twitter တွင်မျှဝေမည် ခုနှစ်တွင်လင့်ခ်လုပ်ထားသောအပေါ်ဝေမျှမယ် အီးမေးလ်တို့ကဝေမျှမယ်
303 မြောက် Main Street, Suite 600
Rockf သို့မဟုတ် d, IL 61101
ကိုးကွယ်ရာဘာသာ၊ လိင်၊ မသန်စွမ်းမှု၊ အသက်၊ လိင်ဆိုင်ရာတိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမဖြစ်တည်မှုသို့မဟုတ်ဥပဒေဖြင့်အကာအကွယ်ပေးသောအခြားမည်သည့်လက္ခဏာကိုမဆို Prairie State Legal Services မှခွဲခြားခြင်းမရှိပါ။